02:54 शुक्रबार ९ , जेष्ठ २०७७ NepalBit 721
अन्जु न्यौपाने नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा काम गर्नुहुन्छ । स्टाफ नर्स भएर वहाँले २०७० सालदेखि त्यहाँ काम गर्न थाल्नुभएको हो । सेवामुलक पेशामा रहनुभएकी अन्जु समाजिक काममा झन धेरै सक्रिय रहदै आउनुभएको छ । उडन नेपालको प्रमुख संरक्षक र नीलसागर असहाय, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र कोहलपुरको संयोजकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । अन्य विभिन्न संघसंस्थाहरूमा आवद्ध उहाँ राम्रो मोटिभेशनल स्पिकर (प्रेरक वक्ता) पनि हुनुहुन्छ ।
स्टाफ नर्स, सामाजिक अभियान्ता र प्रेरक वक्ताभन्दा वाहेक लेखकको रुपमा पनि वहाँको परिचय थपिएको छ । वि.सं. २०७६ मा पाँचपोखरी प्रकाशन गृह काठमाण्डौंबाट वहाँको पहिलो उपन्यास ‘मोड’ प्रकाशित भएको छ । ‘मोड’ को प्रकाशनसँगै वहाँको परिचय लेखकका रुपमा पनि थपिएको हो । ‘मोड’ एक प्रेरक उपन्यास हो । १ सय ५२ पेजको यो उपन्यास एकै बसाइमा पढ्न सकिन्छ ।
‘मोड’ को भूमिकामा अन्जु लेख्नुहुन्छ – “मलाई थाहा छ, पहिलो सन्तान जन्माउँदा जन्माउनुअघि केके प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनेर अनुभव हुँदैन र पीडा पनि बढी हुन्छ । यस पुस्तकमा मेरा आफ्नै अनुभव पनि छन् र अनुभवभन्दा बेगरका कुरा पनि छन् । उपन्यास भएको नाताले धेरै कल्पनाका कुराहरु पनि जोडेकी छु । लेख्ने क्रममा धेरैभन्दा धेरै प्रेरक कुराहरु राख्ने सोच थियो, त्यो सोच मैले पूरा गर्ने प्रयास गरेकी छु । पुस्तक पढेपछि पाठकले सकारात्मक अनुभव गर्नुहोस् भन्ने मेरो उदेश्य हो ।”
‘मोड’ उपन्यासका बारेमा नेपालबिटका लागि रामप्रसाद खरेलले अन्जुसँग केही प्रश्नहरु गर्नुभएको छ । अन्जुसँग रामप्रसाद खरेलले गर्नुभएको कुराकानी :
१) ‘मोड’ मा लेख्नुभएको छ एउटा पुस्तक लेख्ने ठूलो रहर थियो अनि लेखेँ, यो रहर चै कसरी आयो ?
म सेल्फहेल्पका धेरै पुस्त्कहरु पढ्थे । जस्तै ः डा.योगि विकाशानन्द, नेपोलियन हिल, रोबर्ट टि . कियोसाकी लगायत थुप्रै लेखकहरुका पुस्तकहरु । यी पुस्तक पढ्ने क्रममा मलाई पनि आफ्नै जीवनमा घटेका घटना लाई आधार बनाएर प्रेरणादायी पुस्तक लेख्ने रहर जाग्यो ।
२) ‘मोड’ को बिषयवस्तुको छनौट कसरी भयो ?
मोड उपन्यासमा लेखिए जस्तै म सानोमा लगभग मुत्युको नजिक पुगिसकेकि थिए । तर मैले सकारात्मक वातावरण पाएका कारण मुत्युलाई जित्न सफल भए । यही विषयलाई नै मैले लेख्नका लागि छानेँ ।
३) स्वास्थ्यकर्मीका आखाँमा त अनेकन पीडाका दृश्यहरु हुन्छन, अब एउटा लेखकका हिसाबमा कसरी लिनुहुन्छ ?
हो, स्वास्थ्यकर्मीले विभिन्न पीडा बोकेका मान्छेहरूसँग फेस टु फेस गर्नुपर्छ । तर म लेखक भएर सोच्दा कतिपय मान्छेले सकारात्मक रुपले पीडा झेल्न सक्छन् र त्यसबाट मुक्त पनि हुन्छन् भने कतिपय मान्छे त्यही पीडामा रुमल्लिइरहेका हुन्छन् ।
४) ‘मोड’ की दीपा चै तँपाई नै हो ?
उपन्यास भएका कारण हो र होइन दुबै भन्न सकिन्छ । हो, तर सबै होइन । होइन ,तर अलि अलि हो । भन्नखोजेको यसमा सत्यतासँगै केही काल्पनिकता पनि मिसाइएको छ ।
५) दीपा र सुमित्रामा केन्द्रित देखिन्छ यी पात्र कसरी जन्मिए ?
यी पात्रहरु मैले काम गरिरहेको हस्पिटलमा देखिएका पात्रहरु हुन । तर यीनको नाम परिवर्तन गरेर दिपा र सुमित्रा बनाइएको हो ।
६) पुस्तक प्रकाशनपछि आफूलाई कस्तो महसुस गर्नुभयो ?
सन्तान जन्मिए जतिकै खुसी लाग्यो । सोचेकी थें पुस्तक लेख्न सजिलो हुन्छ । तर होइन रहेछ । लेख्न गाह्रो हुँदो रहेछ । पुस्तक प्रकाशित भए पछि अत्यन्तै खुसी महशुस भयो ।
७) पाठक प्रतिक्रिया र बजार कस्तो भयो ‘मोड’ को ?
पढेका साथीहरुले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो । बजारमा त्यति पठाइएन । तर जति पठाइयो राम्रो प्रतिक्रिया पाएँ । अब छिटै नै दोस्रो संस्करण प्रकाशन हुने क्रममा छ ।
८) प्रेरक उपन्यास लेखेको भन्नुभयो, बरु प्रेरक गैरआख्यन पुस्तक नै लेख्नुभएको भए राम्रो हुन्थेन् ?
गैरआख्यान सुरुका पाठकले कम रुचाउँछन् र उपन्यास बढी पढ्छन । यदि प्रेरणादायी कुरालाई औपन्यासिकता दिएँ भने सामान्य पाठकले पनि पढ्लान भनेर आख्यान छानेकी हुँ ।
९) लेखकहरु समाजको कथा भन्दापनि आफ्नो कुण्ठा लेख्छन् भन्ने आरोप छ । के छ तँपाईको भनाई ?
केही हदसम्म सत्य होला । तर मेरो हकमा त्यो होइन । मलाई कुन्ठा पोख्नु नै छैन । बरु हरेक मान्छेमा पीडा हुन्छ र पीडाबाट मुक्त हुन प्रेरणा चाहिन्छ भन्ने हिसाबले लेखेकी हुँ ।
१०) ‘मोड’ कुण्ठा हो कि प्रेरणा ?
११) ‘मोड’ लाई कत्तिले त अन्जुको आत्मकथा पनि भने । यस्तो प्रतिक्रिया सुन्दा कस्तो लाग्छ ?
आत्मकथामा सबै सत्यता मात्र हुन्छ, काल्पनिकता हुँदैन । मोडमा काल्पनिकता पनि छ, त्यही भएर यो उपन्यास हो ।
१२) ‘मोड’ ले अन्जुलाई कुन मोडमा पूर्यायो ?
‘मोड’ ले अन्जुलाई धेरै सिकायो । अझै लेख्न प्रेरणा दियो । म अझै डुबेर लेख्न सक्छु भन्ने विश्वास दियो । म पुस्तकका माध्यमबाट समाजमा लुकेका कुराहरू प्रेरणादायी रूपमा निकाल्दै पनि जानेछु ।